Rebuilderd: Rafitra fanamarinana fonosana binary mahaleo tena ho an'ny Arch Linux | Avy amin'ny Linux
vao haingana ny fanombohana ny "Rebuilderd" dia nambara izay napetraka ho rafitra fanamarinana tsy miankina ho an'ny fonosana binary de mamela handamina ny fanamarinana ireo fonosana fizarana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny dingan-dàlana mihazakazaka izay mampitaha ireo fonosana azo sintonina sy ireo fonosana voaray vokatry ny fanarenana ny rafitra eo an-toerana.
Amin'ny teny hafa, ity rafitra ity dia manome serivisy manara-maso ny satan'ireo fonosana fonosana ary manomboka manangana fonosana vaovao ao amin'ny tontolo referansa, izay fanjakan'izy ireo dia ampifanarahina amin'ireo toe-javatra iainana Kitapo fananganana lehibe Arch Linux.
Rehefa manangona indray, isaina ny nuansa toy ny tena fampitoviana ny fiankinan-doha, ny fampiasana fananganana tsy miova sy ny kinova an'ireo fitaovana fananganana, ny safidy mitovy amin'ny safidy sy ny toerana misy anao ary ny fitehirizana ny filan'ny fivorian'ny rakitra (mampiasa ireo fomba fanoratana mitovy).
Ny fametrahana ny fizotran'ny fananganana dia manilika ny mpanangona tsy hampiditra fampahalalana topimaso tsy mitombina toa ny soatoavina soatoavina, ny rohy mankamin'ny làlan'ny rakitra ary ny angon-drakitra momba ny daty sy ny fotoana fanangonana.
1 Momba an'i Rebuilderd
2 Fametrahana sy fanatanterahana
Momba an'i Rebuilderd
Ny fanandramana andrana fotsiny no misy amin'izao fotoana izao hijerena ireo fonosana Arch Linux miaraka amin'ny rebuilderd, fa mikasa ny hanampy fanampiana an'i Debian atsy ho atsy.
Amin'izao fotoana izao, ny fananganana azo averimberina dia omena ho an'ny fonosana 84.1% avy amin'ny repository Arch Linux lehibe, 83.8% izy avy amin'ny tahiry fanampiny ary 76.9% avy amin'ny tahiry vondrom-piarahamonina. Raha ampitahaina, 10% io isa io ao amin'ny Debian 94,1.
Na izany aza, ny fananganana dia ampahany lehibe amin'ny fiarovana, toa azy ireo omeo fotoana ny mpampiasa rehetra hahazoana antoka fa ny fonosana byte-for-byte atolotry ny fonosana fizarana dia mifanentana amin'ireo natambatra manokana avy amin'ny loharano.
Raha tsy misy ny fahaizana manamarina ny mombamomba ilay mimari-droa voaangona, ny mpampiasa dia tsy afaka matoky an-jambany fotsiny ny fotodrafitrasa fananganana olon-kafa, manimba ny mpanangona na ny fitaovana fanangonana izay mety hitarika fanoloana marika miafina.
Fametrahana sy fanatanterahana
Amin'ny tranga tsotra indrindra, mba hampandehanana ny fananganana indray dia ampy ny fametrahana ny fonosana rebuilderd avy amin'ny tahiry mahazatra, ampidiro ny lakilen'ny GPG hanamarinana ny tontolo iainana ary hampandeha ny serivisy rafitra mifanaraka amin'izany. Azo atao ny mampiditra tambajotra misy tranga maro voaorina indray.
Mametraka, tsy maintsy manokatra «terminal» isika ary manoratra ao ity baiko manaraka ity:
Vita ity, izao dia tsy maintsy manafatra ny lakilen'ny GPG isika, satria Rebuilderd dia tsy maintsy manamarina ny sary boot an'ny Linux Linux, satria ity eo amin'ny terminal dia tsy maintsy soratantsika ity baiko manaraka ity:
Aorian'io mila manampy ny mpampiasa anay amin'ny vondrona Rebuilderd izahay, nanomboka mety hahazo lesoka isika:
ankehitriny mila manamarina fotsiny izahay fa efa mandeha i Rebuilderd momba ny rafitra, noho izany, mila manoratra fotsiny isika:
Ary raha te hizara valiny amin'ny tambajotra isika dia mila manoratra:
systemctl mamela – izao rebuilderd rebuilderd-worker @ alpha
Zava-dehibe izao ny mandray an-tsaina fa tsy hihetsika i Rebuilderd raha tsy efa voafaritra mazava tsara avy eo amin'ny toerana itrangan'ny fonosana rafitra, noho izany dia tsy maintsy manova ny rakitra /etc/rebuilderd-sync.conf izay namboarina ny mombamomba ny fampifanarahana. ary miavaka ireo anaran'ny mombamomba:
Ohatra iray amin'ireto manaraka ireto:
Raha vantany vao novaina ny rakitra dia mila mamela ny mpamaky fotoana handrindrana ho azy ny profil ianao:
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny Rebuilderd ianao, tokony ho fantatr'izy ireo fa voasoratra amin'ny Rust izy io ary zaraina eo ambanin'ny lisansa GPLv3 ary azonao atao ny manamarina ny antsipiriany rehetra sy ny kaody Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Rebuilderd - Rafitra fanamarinana fonosana binary mahaleo tena ho an'ny Arch Linux
Fonosana maloto 700 mahery ampiasaina amin'ny fitrandrahana no hita tao amin'ny RubyGems